စာအုပ်ကောက်နုတ်ထားပါတယ်: Don't Envy the Bench — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ငါအထက်တန်းကျောင်း varsity ဘတ်စကက်ဘောကစား. ဒါကလုံးဝဟုတ်မှန်ကြေညာချက်င် (သင်စကားလုံးကစားသတ်မှတ်ဖို့ကျွန်မကိုအတင်းမဟုတ်လျှင်). ငါငယ်လေးတစ်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး, သင်တစ်ဦးအကြီးတန်းခဲ့ကြလျှင်သင် varsity အသင်းအပေါ်တစ်ဦးပွဲချင်းပြီးတယ်. ငါဘတ်စကက်ဘော၏ဂိမ်းကိုချစ်, ဒါပေမယ့်ငါကကစားထက်ကစောင့်ကြည့်မှာအများကြီးပိုကောင်းတာ. ငါ "C'mon ကစားသမားဆုံးမများနှင့်ညီတည်းနိုင်!"All-ကြယ်ပွင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူဒိုင်လူကြီးမှာ. သို့သော်အဖြစ်ဝေးကဝင်အဖြစ်ဖွင့်. အကြှနျုပျ၏ကျောင်းတွင်အမှန်တကယ်ဘွဲ့ရနိုင်ရန်အတွက်အားကစားကစားအကြောင်းကိုဒီထူးဆန်းတဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့, သော်လည်း, ဒါကြောင့်ကိုယ့်တိုင်းသောကြာနေ့ညအထိကိုက်ညီနှင့်ရှက်ကြောက်ခြင်း၌ငါ၏ဦးခေါင်းသည်ဆွဲထားခိုင်းခဲ့သည်.
အဆိုပါရပ်တည်ချက်အမြဲအိမ်မှာဂိမ်းတွေအတွက်အပြည့်အဝရှိကြ၏. စိတ်လှုပ်ရှားမိဘများနှင့်ကျောင်းသားများ-အများအပြား mine- ၏မိတ်ဆွေများကသူတို့ကို၏အသင်းကိုအထောက်အကူပြုရန်ဖွင့်ပြသ. ဝမ်းနည်းစရာ, သူတို့ဖြစ်ကောင်းငါပြုသကဲ့သို့ဂိမ်းထဲမှာခြားနားချက်၏အဖြစ်တာလုပ်. ငါအချိန်ထဲကနေအချိန်အား bleachers သို့တစ်ချက်လို, လူများအပေါင်းတို့သည်စဉ်းစားခဲ့ကြသောအရာကိုအံ့ဩ, အထူးသဖြင့်ငါ့အဖေ. ငါကသူကိုနှစ်ဦးစလုံးစောင့်ကြည့်ဖို့ပဲရှိသဘောပေါက်ထင်, ငါမူကားပိုကောင်းတဲ့ထိုင်ခုံရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပျက်.
တကယ်တော့ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ဖန်ဆင်းတစ်ခုတည်းသောအချိန်ဂိမ်း-သင်သိ၏အလွန်အဆုံးမှာခဲ့သည်, သူတို့ယောက်ျားတွေအတွက်ထားကြသောအခါထိုသူတို့အဘို့အမကောင်းတဲ့ခံစားရ. ငါအနိုင်ရ secure နိုင်ဒါသူတို့အားနောက်ဆုံးစက္ကန့်သူတို့ငါ့ကိုကယ်တင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောပြလို. ကျနော်တို့နောက်ဆုံးဉသြသံပြီးနောက်ပြိုင်ဘက်အသင်းမှနှင့်အတူလက်ကိုလှုပ်ခါအဖြစ်, ငါကစားသမားအတွင်း၌ snickering ခဲ့ကြသည်နဲ့တူသူတို့သညျငါ့ကိုမှာကြည့်သောအခါခံစားခဲ့ရဟု, "ဂိမ်းအကောင်း။ "
ငါသည်ငါ့ရေချိုးခန်းပြီးနောက် Locker အခန်းကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာ, ဘယ်သူမှငါနှင့်အတူအရုပ်ပုံချင်တယ်. အလယ်ကျောင်းကကလေးတွေ၏ငါ့ကိုအဘယ်သူမျှရန်မျှော်ကြည့်. တစ်ခုခုကိုအသင်းအပေါ်ဘယ်သူကမှငါ့ကိုငွူစူ. အဘယ်ကြောင့်? ငါမိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်ထက်ပို Spike Lee ကခဲ့မိသောကြောင့်. ငါဂျာစီကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ပန်ကာခဲ့. ငါဂိမ်းသို့ဖန်ဆင်းဘယ်တော့မှသူကိုကောင်လေးခဲ့သည်, နှင့်ဘယ်သူမှ benchwarmer envies.
အစဉ်အမြဲငါနေတဲ့ဟန်ဆောင်လေကြောင်း Jumper ရိုက်ကူးတစ်စုံတစ်ယောက်ကသတိရနှင့်အမည်မသိအခန်းကဏ္ဍကစားသမား၏နာမကိုခေါ်မရနိုငျ. သူတို့သညျယောက်ျားတွေဆဲကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြစ်ကြသည်, ဒါပေမယ့်သင်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်တစ်ဦးဘတ်စကက်ဘောကစားသမားနှင့်အတူအရပ်တို့ကိုရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်, ဒါကြောင့်အများအားဖြင့် starter င်, ထွက်ရှိအစွန်အဖျား-ပေါ်ကနောက်ဆုံးဉသြသံမှသူသည်ကောင်လေး. ယော်ဒန်မြစ်အနွှယ်ခပ်သိန်းလက်ကို switched အခါ, သို့မဟုတ် Ray Allen ကအဉသြသံမှာသုံးထိမှန်တဲ့အခါသင်ဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်. သူတို့သည်သင်ဖြစ်ချင်တဲ့ယောက်ျားတွေရှိပါတယ်. သူတို့ဟာသူတို့အသော့အချိန်လေးမှာ action ကိုရောက်နေ, ရုံ spectating မဟုတ်. အသက်မှကြွလာသောအခါဒါပေမဲ့တချို့အကြောင်းပြချက်များအတွက်ကျနော်တို့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုပါ. လူတိုင်းဟာတစ် benchwarmer ဖြစ်လိုလား.
ငါဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? သင်တစ်ဦးပုံမှန်ကောလိပ်ကျောင်းဝင်းပေါ်တက်ပြသနှင့်စာသင်ဘို့မိမိတို့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အကြောင်းကျောင်းသားများကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့လျှင်, သငျသညျရှငျဘုရငျအတှကျအသကျရှငျအကြောင်းကိုအများကြီးနားမထောင်ကြ. သငျသညျမဟာပုံပြင်ထဲမှာအခန်းကဏ္ဍကိုကစားထက်မဲ့ပျော်စရာအကြောင်းပိုမိုနားထောငျတျောချင်ပါတယ်. ဒီတစ်ခါလည်းသင်ပင်အချို့သောနားထောငျတျောချင်ပါတယ် 7:00 နံနက်. တက္ဏဗေဒ. ငါသည်သင်တို့ကိုအထက်တန်းကျောင်းသို့မဟုတ်တစ်ရုံးအဆောက်အဦမှာအလားတူတုံ့ပြန်မှုခံယူချင်ပါတယ်ယူဆဖို့ဆန္ဒရှိတာပါ. ကြှနျုပျတို့အားလုံးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်အလိုဆန္ဒများရှိ, သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုအမြဲမဖြစ်.
ငါသည်သင်တို့ကိုငါအဖြစ်စျကွောစီရငျကျပ်တည်းသောစစ်ကြောစီရင်ဟုဆိုတာပါအဘယျသို့ယူကြဘူးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်. ငါသရုပ်ဆောင်ကိုအမှိုက်ပစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးမဟုတ်ဘူး; ငါလက်ျာဘက်လည်းငါ၏အလိုင်းများရရှိရန်ကြိုးစားနေတစ်ဦးကိုထောက်ပံ့သရုပ်ဆောင်တာပါ. ငါအောက်ပါယရှေုသညျအမြဲဆွဲဆောင်ပုံရသည်ဟုပြောသည်လျှင်ငါသည်မုသာကိုခံရချင်ပါတယ်. ညာဘက်အစဉ်အမြဲပိုင်ခွင့်မခံစားရပါဘူး.
ငါအချိန်သတိရ, ငါသည်ငါ၏အသင်းတော်ကိုကြားမှာဝန်ထမ်းများဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမကြာမီပြီးနောက်, ငါ့အလိုရှိသမျှမိတ်ဆွေများတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဂီတပွဲတော်မှာဖျော်ဖြေဖို့သွားကြစဉ်အခါ. ငါဒါဆိုးရွားစွာရှိချင်တယ်, ငါ့အလုပ်သစ်၏ပထမဦးဆုံးအပတ်အတွင်းကျဆင်းသောကြောင့်, ဒါပေမယ့်ငါကလုပ်မပေးနိုင်. ငါသည်ငါ့နှလုံးအတွက်ငြူစူသောစိတ်ကိုတိုက်ရတယ်. ငါသည်သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့အံ့သြဖွယ်အတှေ့အကွုံအွန်လိုင်းဓါတ်ပုံတွေကိုတင်ကိုမွငျလြှငျ, အထူးသဖြင့်လာသောအခါ.
တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာအသက်တာနှင့်အတူထိုလမ်းခံစားရ. အခြားသူများကိုမနာလိုရန်လွယ်ကူဒါဟာင်, သူတို့သည်ငါ၏အဆွေခင်ပွန်းကဲ့သို့ကယျြအရာတစ်ခုခုလုပ်နေခဲ့ကြလုပ်နေလုပ်နေအထူးသဖြင့်အခါ,. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူမှားကျရှငျနကွေသိလျှင်ပင်, ကျွန်တော်တို့တခါတရံကိုယျ့ကိုယျကိုသူတို့ကို join ဖို့တောငျတှေ့. ထိုယေရှုသည်ဂိမ်းထဲကယူတဲ့တူခံစားရအောက်ပါစေသည်, အတွက် subbed တဲ့မ. သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်အခြားသူများကိုမနာလိုကျွန်တော်တစ်ခုခုအပေါ်ထွက်ပျောက်ဆုံးနေယူဆပါဘူး?
ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဟာ OUT ပျောက်ဆုံးထင်ပါတယ်ပါ?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုတစ်ခုမှာသာမှန်ကျွန်တော်တို့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ဖွင့်အဘယျအတှေ့မွငျနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ကျနော်တို့ကြီးမားတဲ့ရုပ်ပုံလွှာလက်လွတ်. ရှေ့ရှိအရာအာရုံ၌ရှိကြ၏တဲ့အခါကင်မရာနှင့်တူရဲ့နောက်ကွယ်မှအရာအားလုံးမှုန်ဝါးဖြစ်ပါသည်. တစ်ခုလုံးကိုရုပ်ပုံရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့မှန်ဘီလူးချိန်ညှိရန်လိုအပ်ပါတယ်.
ရှင်းလင်းစွာမြင်ဖို့ရုန်းကန်မရှိသူသည်ဤမြေကြီးပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမျှမရှိင်. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပွစျရှိစိတျနှလုံး၏အကျိုးဆက်များကိုတယောက်င်. ဒါပေမယ့်သင်ညီမျှခြင်းသို့နုပျိုပစ်သောအခါ, ဒါကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်အထိထည့်သွင်း. တဦးတည်းနှစ်အရွယ်ကောင်းစွာလမ်းလျှောက်ဖို့ရုန်းကန်, နှစ်ဆယ်- အရာတွေကိုကောင်းစွာမြင်ဖို့ရုန်းကန်.
ဒါဟာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါဘူး. ဒါဟာတစ်ပြိုလဲကမ္ဘာမှာလူငယ်ဖြစ်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာရဲ့အစိတ်အပိုင်းရဲ့. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအကျဉ်းခဲ့ကြခြင်းနှင့်သာဤမျှလောက်ဖူး. သငျသညျကိုသာသုံးအပိုင်းပိုင်းဖူးတဲ့အခါတပြင်လုံးကိုပဟေဠိစိတ်ကူးဖို့ခက်ရဲ့. ဒါကကျွန်တော်အရှက်ကွဲခြင်းအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိရိုကျနှကျသငျ့တယျလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး; ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်သတိထားမိဖြစ်သင့်ဆိုလိုတာ, ဆိုးယုတ်သော shortsightedness ဘေးအန္တရာယ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောကြောင့်,.
သငျသညျအစဉျအမွဲတဲ့နှငျးမုနျတိုငျးထဲမှာကားမောင်းကြိုးစားခဲ့ဖူး? ခရစ္စမတ်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးကလေးမွေးဖွားခဲ့ပြီးနောက်, ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မရှိကြောင်း Pittsburgh မှပြန် DC ကမှမောင်းအဖြစ်ရိုက်ခတ်နေတဲ့ကြောက်မက်ဘွယ်သောနှငျးမုနျတိုငျး. မိုဃ်းပွင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SUV ကားပေါ်တွင်ရှေ့မီးလိုက်ပါပြီနှင့်ကားရှေ့မှနျ Wiper ကအတူတက်မစောငျ့နိုငျအောငျအစာရှောငျကျဆင်း. ငါစိတ်လှုပ်ရှားစွာဘီးမြိ်ု့သကဲ့သို့ငါ၏လက်ဖြူ; ငါသည်ငါ့ဇနီးနှင့်သား၏အသက်တာငါ့လက်၌ရှိသသဘောပေါက်.
ငါတင်းမာနေခဲ့သည်. ငါသာငါ့မျက်နှာကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌အနည်းငယ်လက်မတွေ့မြင်နိုင်, ငါသွားရာအရပ်ဒါနဲ့စာသားမသိခဲ့ပါ. ငါရှေ့ဆက်ဘာမသိခဲ့ပါ, ငါ့ကိုကအားလုံးကိုထွက်အလုပ်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခဲ့ရတယ်. ဒါကအကောင်းတစ်ဦးခံစားချက်မဟုတ်ဘူး. ရှိ၏ကားတစ်စီးရှေ့ကိုရပ်တန်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏မှတ်တိုင်-and သွားလာရင်းအသွားအလာရှိသူ၏ပြတင်းပေါက်ချွတ်ရှင်းလင်းလျှင်ငါမမွငျနိုငျ.
ငါပင်သေး slick လမ်းများဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြပြီမဟုတ်. သင့်ရဲ့ဘရိတ်လုပ်ရင်သင့်ကားတစ် tile ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာခြေအိတ်ဝတ်ထားဆိတူကျဆင်းခဲ့သည်ကိုဆိုလို. ဒါကြောင့်အစဉ်အဆက်, ငါ၏အနည်းဆုံးအကြိုက်ဆုံး drive ကိုအဘယ်ကြောင့်အသငျသညျနားလညျနိုငျ. ငါအမျွောကြီးတစ်ဦးချောအရပ်၌ရှိ.
သငျသညျအစဉျအကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌ဖြစ်နိုင်ပုံကိုဆိုးရွား shortsightedness စဉ်းစားဖူး? သာကျွန်တော်တို့ကို၏ရှေ့၌တရားဘာပျေါတှငျအခွခေံဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်လိုလျှင်, ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ရေမှတ်သို့ run ဖို့ခညျြနှောငျနေ. ကျွန်တော်တို့များလွန်းနောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပျက်ကိုမနှငျ့ ပတျသကျ. ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်.
ပါတီမှာယစ်မူးရယူခြင်းယခုအချိန်တွင်အတွက်ကောင်းတစ်ဦးအိုင်ဒီယာတူထင်ရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်မိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်များမှဘုရားသခင်နှင့်စေပြီးသော်၎င်း. သင့်ရဲ့ချစ်သူသို့မဟုတ်ရည်းစားနှင့်အတူအိပ်ပျော်သည်ယခုအချိန်တွင်အတွက်အနိုင်ရရှိတူထင်ရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့နွေးထွေးမှုမျိုးတစ်ဦးအိမ်ထောင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ပြည်ထောင်စုကနေခွဲခံစားခံရဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာမှမဟုတ်ဘဲ.
ကျနော်တို့စာအုပ်ကတဆင့်သွားအဖြစ်ကျနော်တို့ပိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်များဤအမျိုးအစားများအတွက်ငုပ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အမှတ်ဖြစ်ပါသည်, ကျွန်တော်တို့ကြီးမားတဲ့ရုပ်ပုံလွှာထင်ရန်ရှိသည်. ကျွန်တော်တို့လုပ်တိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပိုကြီးတဲ့ပဟေဠိ၏သေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစဖြစ်ပါသည်. ထိုအကိုကိုးကားများအတွက်ကြီးမားတဲ့ရုပ်ပုံလွှာမှာရှာဖွေနေခြင်းမရှိဘဲ, ကျွန်တော်တို့မှားယွင်းစွာတိုင်းအချိန်အပိုင်းပိုင်းနေရာချပါလိမ့်မယ်. ပိုပြီးတစ်ခုလုံးတစ်သက်တာထက်အချိန်အတွက်ခဏတန်ဖိုးထားမှကြေကွဲဖွယ်ဒါဟာင်.
*ဒါဟာခရီးစဉ်ရဲ့အသစ်စာအုပ်၏တတိယအခနျးမှာနေကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်, တက်. မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်, အားဖြင့်အခါသင် Pre-အမိန့်ထ ဇန္နဝါရီလ 26, သငျသညျအခမဲ့အဘို့ဆုကျေးဇူးတော်အတစည်းရလိမ့်မယ်, အယ်လ်ဘမ်အပေါ်လုပ်မယ့်ဆုကြေးငွေလမ်းကြောင်းအပါအဝင်. ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုရွေးနှုတ်တော်မူဖို့အားလုံးကိုအသေးစိတ်များမှာ: http://risebook.tv/preorder
Emanuel • ဇန္နဝါရီလ 15, 2015 တွင် 12:16 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါဥစ္စာ၏ကြီးမားသောဂီတပရိတ်သတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုပေမယ့်သင်တို့ကိုငါရေးနိုင်ခြင်းမရှိစိတ်ကူးဒါကောင်းသောခဲ့. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျကိုကောငျးကွီးပေးစောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေ> Btw ငါဆူရာနမ်ကနေမိပါတယ်. တက်ကောင်းကြီးပေး
Matt • ဇန္နဝါရီလ 15, 2015 တွင် 1:54 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါ Chileshe ခဲ့သည် • ဇန္နဝါရီလ 16, 2015 တွင် 5:45 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
နောက်ဆုံးဝါကျငါ့ကိုတယ်. ပိုပြီးတစ်ခုလုံးကိုတစ်သက်တာထက်ကာလ၌အခိုက်တန်ဖိုးထားရန်၎င်း၏ကြေကွဲဖွယ်. ယခင်နီးပါးအမြဲ Other ဘဝ၌ရှိကြ၏ဘယ်မှာငြူစူတဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်. ရဲ့ငါတို့ဘယ်မှာများအတွက်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြစို့. ကျနော်တို့ရှိပါတယ်ဘာလို့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်. သို့သော်, ကျနော်တို့ကအားလုံးကိုမှတဆင့်သူ့ကိုဝန်ခံဖို့လိုအပ်.
Kiggundu Brian • ဇန္နဝါရီလ 16, 2015 တွင် 2:19 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး!!.ဤစာအုပ်ရဖို့မစောင့်နိုင်ပေမယ်ငါတို့သည်အဘယ်သို့ #uganda အာဖရိကမှာကဒီမှာသူတို့ကိုနှိမ့်ချရကြဘူး
Kiggundu Brian • ဇန္နဝါရီလ 16, 2015 တွင် 2:24 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး…!!! သင့်ရဲ့ဂီတကိုအမြဲငါ့ကိုစိတ်အားရုံဤတာမစောင့်နိုင်ပေမယ့်ဘယ်လိုချကဒီမှာယူဂန်ဒါအာဖရိက၌ရှိသကဲ့သို့, ဤကိုချစ်!.သခင်သငျသညျကိုကောင်းကြီးပေးမည်အကြောင်း
Kshntiki • ဇန္နဝါရီလ 16, 2015 တွင် 9:13 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်ကောက်နုတ်ချက်ငါ့ကိုငါ nade ဘဝမှာရွေးချယ်မှု၏ alot စဉ်းစားလုပ်.
Carlton • ဇန္နဝါရီလ 17, 2015 တွင် 1:19 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Gao • ဇန္နဝါရီလ 18, 2015 တွင် 1:50 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အိုး!ဘုရားသခငျသညျငါသာဤစာအုပ်ရှိနိုင်ပါသည်လျှင်…ဒီအပိုင်းအစကြောက်မက်ဘွယ်များနှင့်ယခုငါကြီးရုပ်ပုံစိတ်ကူးယဉ်တာဖြစ်ပါတယ်(စာအုပ်)..#နှင့် BLE ssingsToU
JieWoo • ဇန္နဝါရီလ 19, 2015 တွင် 2:39 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး! အဖြေကိုရှာတွေ့!!! သငျသညျ mayne ကျေးဇူးတင်ပါသည်! GBU! ဂျာမဏီကနေနှုတ်ခွန်းဆက်!
Terrell • ဇန္နဝါရီလ 20, 2015 တွင် 2:07 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ် Lee က, ငါသည်ငါ့ခရီးသခင်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်တစ်လျှောက်တွင်ငါ၏အလမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ရ. ကျွန်မခရစ်ယာန်တစ်ဦးကြီးပြင်း, ဒါပေမယ့်ကွာယင်း၏သွန်သင်ချက်ကနေပြောင်းရွှေ့. ငါသည်ထာဝရဘုရား၏ညှနျကွား၌ငါ့ကိုပြန်စီးပဲ့ကိုင်ကြောင်း youtube က၏တရားဒေသနာ၏သင့်ကောင်းမွန်သောဘဝအယ်လ်ဘမ်နှင့်စုံတွဲစကားကိုနားထောငျတိုငျအောငျဒါဟာမဟုတ်ခဲ့. ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့အ brotha ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်.
tamsyn • ဒီဇင်ဘာလ 28, 2015 တွင် 7:35 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
စျြဆုံးခရီးစဉ်. တစ်ဦးကဒဏ်ငွေခေါင်းဆောင်. သင့်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုငါယေရှုသည်နဲ့ငါ့ဆက်ဆံရေးအတွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဂုဏ်အသရေငါ့ကိုသတိပေးနှင့်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ပုသေးသေးလေးဆုံးဖြတ်ချက်များသည်ငါ့ကြမ္မာဘောင်ကိုဆက်လက်ဦးမည်. ကျနော်တို့တော်ဝင်ယေရှု၏တစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်လတ်နေကြတယ်. တိုင်းစာဖတ်သူကိုထကွဟုခေါ်တွင်သည်ဤတော်ဝင်ဘဏ္ဍာကို box ထဲမှာဘဏ္ဍာကိုရှာဖွေနိုင်ပါစေ. လူအပေါင်းတို့သည်လမ်းကိပ်တောင်းကနေပဌနာ, တောင်အာဖရိက.